Umama Alipia - kanjani ukucela usizo
Ama-Esoterics Imithandazo nemifanekiso
Umama waseKievine uMama Alipia wasiza abantu ngisho nangesikhathi sokuphila kwakhe, omunye umuntu wanikeza iseluleko, othile wakhuleka, othile udinga indawo yokuhlala nokudla, omunye umuntu wayedinga ukwesekwa okungokomoya. Nganoma iyiphi inkinga kwakungenzeka ukuba eze kumuntu omdala, iminyango yeseli yakhe yayihlale ivulekile kwabaswele. Emva kokufa kwakhe, kuze kube yilolu suku, amakholwa abuyela ethuneni likaMama Alipia ukucela usizo nokuthandaza ku-saint. Hlonipha indoda endala njengomsizi ebhizinisini, umeluleki endleleni efanele, umsindisi ekufeni, njll. Abantu bakholelwa ukuthi uma ucela usizo ngobuqotho kuMama Alipia emthandazweni wakho, nakanjani uzosiza.
Ngingacela kanjani usizo kuMama Alipia?
Kumama ka-Alipia, abantu baphendukela ezicelo ezihlukahlukene ngethemba lokuzwa, futhi ngokusho kwezibuyekezo eziningi, imithandazo iyasiza. Mbuze mayelana nokuphulukiswa ekuguleni okukhulu, mayelana nokuthola indawo yokuhlala, impilo enhle, njll. Abaningi banesithakazelo sendlela yokucela usizo kuMama Alipia, uma kukhona imithandazo ekhethekile noma ungacela usizo ngamagama akho. Kunemithetho eminingana engaqinisekisiwe:
Ngesikhathi sokuthandaza, akufanele ukuphazamiseka, "nyundo" ikhanda neminye imibono.
Ngaphambi kokuba uqale ukufunda umthandazo, cela intethelelo kuzo zonke izono zakho.
Udinga ukucabanga ngomuntu ocela usizo kuye.
Uma usho umthandazo, ungasheshi, usho ngokuzwakalayo noma ngokumemeza.
Amazwi akho mayelana nosizo kufanele azwakale, ngakho-ke funda umthandazo ngokuthi "uzizwe", ungabizi amagama ngokuzithoba.
Funda umthandazo kufanele ube izikhathi eziningana ngosuku, mhlawumbe ekuseni nasebusuku ngaphambi kokulala.
Ngemva komthandazo, ngiyabonga uMama Alipia.
Yiqiniso, ungakwazi ukuthandaza ngezindlela ezahlukene, into eyinhloko ukuthi amazwi akho aqotho, kodwa futhi kukhona imithandazo ekhethekile. Isibonelo, kunomthandazo omfushane kuMama Alipia, osiza ukubhekana nezifo ezimbi:
Umthandazo emva kokudla ukudla
Umthandazo kuNikolai uMsindisi
Umthandazo ku-Eliya umprofethi ngezikhathi zonke
Umthandazo wokulala uzayo
St. Olga - imithandazo yokusizwa ezindabeni
Icon Trubchev yoMama kaNkulunkulu - yini abayithandazelayo?
Umthandazo kaEfrayimi umSiriya ngezikhathi zonke
Umthandazo wokuthula kwengqondo nenhliziyo
Yini esiza isithonjana "Sporuchnitsa izoni"?
Yiziphi izimpawu okufanele zibe khona endlini?
Umthandazo wezingane kanye nomndeni
Izinzuzo kwi-Intanethi - ukungena kwamabhizinisi
I-Emerald jam kusuka ku-ugqumugqumu - izindlela zokungavamile kakhulu ze-billet okumnandi okumnandi
Iyini igama lika-Yegor
I-Library Yomhlaba YaseBhutan
Indwangu eboshiwe yensimbi encane
Umbhede omhlophe omhlophe
Izithombe ezihlekisayo ezingu-20 zezilwane ezenziwe ngesikhathi esifanele
Ama-Sandy amabhishi oLwandle Olumnyama
Isobho sebhontshisi kusuka kubhontshisi ekheniwe
Indlela yokwenza izimbali?
Ukudla kwe-chocolate ukulahlekelwa isisindo
Amakhishi akhiwe ngamapulangwe
UKim Kardashian wabonga abalandeli be-bodysheymers ngokugxekwa kwakhe
Izidakamizwa - izidakamizwa ze-osteochondrosis
I-Edema ngesikhathi sokukhulelwa - ukwelashwa
37 izizathu zokuthi kungani iDenmark yizwe elihle kakhulu lokuphila
Ukuphila okupholile oku-14 kwabahambi